0.5T flake ice igwe
500kg / ụbọchị flake ice igwe + 300kg ice nchekwa bin. Igwe ahụ nwere ihe nkwụnye nkwụnye. Ọ dị njikere maka ịme ice mgbe njikọ dị na mmiri na ike dị mfe. Ice na-apụta n'ime nkeji 5 mgbe onye ọrụ pịa bọtịnụ mmalite. All ọrụ nke ice Ndinam na-mere zuru akpaghị aka n'okpuru akara nke PLC. Usoro a ga - echebe onwe ya pụọ ​​na ụkọ mmiri / akpụrụ mmiri zuru ezu / enweghị ike inye ike / oke ikuku dị elu ma ọ bụ oyi / na ụdị ọdịda ndị ọzọ. W e mere evaporat ...
0.3T flake ice igwe
Aha aha: Herbin Ice Systems Nkọwa maka igwe akụrụngwa igwe 0.3T / ụbọchị. Aha aha: Igwe igwe ice igwe Model: HBC-0.3T Ice kwa ụbọchị na-arụpụta ikike: Ihe karịrị 300kgs kwa awa 24 Ọkọlọtọ na-arụ ọrụ ọnọdụ: 30C ihere okpomọkụ na 20C uzo mmiri Ice akụkụ: 22x22x22mm Ice nchekwa ikike: 280kgs Condenser: Ikuku / Mmiri mma Ike ọkọnọ Single adọ ike ọkọnọ Rịba ama: Igwe akụrụngwa dabere na 30C ọnọdụ ihu igwe na 20C mmiri ọkụ. W ...
Ike na-agba ọsọ: 93.75 KW.
Ice ọkpụrụkpụ: 1.8-2.2mm.
Ike nchekwa nchekwa Ice: 15,000 kgs nke ice flakes ma ọ bụ ahaziri.
Ike na-arụpụta kwa ụbọchị: 30,000 kgs nke ice flakes kwa elekere 24.
Ike nchekwa nchekwa Ice: kgs 10,000 klas ma ọ bụ ahaziri ya.
Ike nwere ike ịsepụta kwa ụbọchị: 20,000 kgs nke ice flakes kwa elekere 24.
Ike nchekwa nchekwa Ice: 2500 kgs nke ice flakes ma ọ bụ ahaziri.
Ike ịmị mkpụrụ kwa ụbọchị: 5000 kgs nke ice flakes kwa elekere 24.
Ike nchekwa nchekwa Ice: kgs nke 1500 ma ọ bụ ahaziri ahaziri.
Ike ịmị mkpụrụ kwa ụbọchị: 3000 kgs nke ice flakes kwa elekere 24.